သင်ဤစကားကိုကြားရန်လိုအပ်! ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည့်အရာမဟုတ်ပါ! ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများ ဂရေဟမ်
အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ - အပြည့်အဝအခမဲ့ EPISODE 2021 this ဤ link သို့သွားပါ။ s https://www.gaia.com/5thkind | အသစ် - "လူသားနှင့်Hyရာမ Hybrids" ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများရာသီ ၃ ။ Gaia တီဗီ၏ယဉ်ကျေး!
ဒီ link ကိုလိုက်နာပါ။
ပဉ္စမမျိုးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Gaia နှင့်ပူးပေါင်းရန်လုံလောက်ခဲ့သည်။ Gaia စီးရီးမှရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အကြောင်းအရာအချို့ကိုယူဆောင်လာသည်။ ဂရေဟမ်ဟန်းကော့ခ်၊ လင်ဒါ Mouton Howe၊ ဂျက်ကာရီ၊ အန်တွန်ပန်းခြံများ၊ Billy Carson၊
ဒီဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို Gaia series ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများမှဗီဒီယိုများကို အသုံးပြု၍ ဖန်တီးထားပြီးလိုင်စင်ရပြီး Gaia.com နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်သည်။
နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှု၌ရှုပ်ထွေးစွာတည်ရှိသောစကြာ ၀ toာအတွက် Portals များသည်တစ်ချိန်ကစကြာ ၀ toာအတွက် portals များဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အခြားကမ္ဘာနှင့်အတိုင်းအတာများမှအရာဝတ္ထုများကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Tower of Babel - Legends ကကျွန်ုပ်တို့အားဘာသာစကားသည်တစ်ချိန်ကလူသားအားလုံးကိုစည်းလုံးစေခဲ့သော်လည်းကြီးမားသောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပေါင်းစည်းစေခဲ့သောထိုအင်အားကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်းအပြင်ခေတ်သစ်ဘာသာစကားအများစုသည်တစ်မူထူးခြားသည့် matrix language မှဆင်းသက်လာသည်ကိုသုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်အနောက်တောင်ပိုင်းရှိရှုပ်ထွေးသောဥမင်များနှင့်ဂူစနစ်များကိုမြင့်မြတ်သောအခမ်းအနားများနှင့်စစ်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မျက်မြင်သက်သေများနှင့်အတူ Hopi နှင့် Zuni တို့၏လူထုပုံပြင်များကိုအတူတကွစုစည်းပါ။ ထောင့်လေးထောင့်၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်၎င်း၏ပြင်ပသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသမိုင်းကြောင်းကိုဖွင့်ရန်။
Agharta နှင့် Patala တို့ကဲ့သို့သောကမ္ဘာမြေအတွင်းရှိယဉ်ကျေးမှုများကိုညွှန်ပြသောရှေးခေတ်ကုဒ်ရှိပါသလား။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဌာနေယဉ်ကျေးမှုများမှပါးစပ်အစဉ်အလာများသည်ကမ္ဘာမြေကြီးအတွင်းနက်ရှိုင်းစွာရှင်သန်နေသောရှေးခေတ်အဆင့်မြင့်ယဉ်ကျေးမှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။
Göbekli Tepe သည်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောမြင့်မြတ်သောကြယ်ငါးပွင့်သော portal တစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းလား။
Denisovans - သူတို့ဟာGianရာမသတ္တဝါများဖြစ်နိူင်တယ်ဆိုတာရှေးခေတ်ianရာမဒဏ္legာရီပုံပြင်များထဲမှာအမှန်တရားသိုလှောင်ခန်းရှိသလား။
သမုဒ္ဒရာအောက်မြို့ကြီးများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အီဂျစ်၊ ဂရိ၊ ရောမနှင့်ဆမ်မီရီယားမှ Arcane မှတ်တမ်းများသည်ကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီးအချိန်ကာလ၏မေ့မြောသွားသောခေတ်မီယဉ်ကျေးမှုများသမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူအဖြစ်အပျက်များကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည်။
သင်ဤစကားကိုကြားရန်လိုအပ်! ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည့်အရာမဟုတ်ပါ! ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများ Stargates - ရှေး ien ည့်နိုင်ငံများ၊ ဂရေဟမ် Hancock ကအတူ
Antikythera ယန္တရား - ရှေးဟောင်းဂရိနိုင်ငံမှတုန်လှုပ်စေသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှု။
Azores ။ အတ္တလန္တိတ်၏အစိမ်းရောင်အံ့သြစရာ။
AlUla မှ Discovery Channel မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် -“ ရှေးအာရေဗျ၏ဗိသုကာများ” (ဇာတ်ကြောင်းပြော - ဂျယ်ရမီရိုင်းလ်)
၈။ ဆူမားရီးယား - ပထမမြို့ကြီးပြိုလဲခြင်း
ဂျိုး Rogan အတွေ့အကြုံ # 1284 - ဂရေဟမ် Hancock ဟာ
မိုက်ကယ် Moore တင်ပြသည် - လူသားများ၏ Planet ကို မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အပြည့်အစုံ Jeff Gibbs မှရိုက်ကူးသည်
ဒဏ္Legာရီပုံပြင်များ (ဇာတ်လမ်းအပြည့်) | သမုဒ္ဒရာရေနုတ်မြောင်း
ပါကစ္စတန်ရှိဟိမဝန္တာနှင့်ရှန်ဂရီလာ Utopia ၏နက်နဲသောအရာများ။ | အချိန်ဇယား
ပင်လယ်လူများနှင့်နှောင်းပိုင်းကြေးခေတ်ပြိုလဲ // ရှေးဟောင်းမှတ်တမ်းမှတ်တမ်း (ဘီစီ ၁၂၀၀-၁၁၅၀)
Persepolis မေ့လျော့သောရှေးဟောင်းမြို့တော် ပျောက်ဆုံးနေသောကမ္ဘာများ | အချိန်ဇယား
တူတန်ခန်မွန်၏ရတနာများ (အပိုင်းအပြည့်) | ဆုံးရှုံးသွားသောအီဂျစ်ဘဏ္asuresာ
ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်းလော - ရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ပါ
Neanderthals ကဘယ်သူတွေလဲ။ | DW မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
AlphaGo - ရုပ်ရှင် အပြည့်အဝဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
အန္တာတိက၏လျှို့ဝှက်ချက်များ | မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အပြည့်အစုံ ခြေရာများ
သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၏သင်္ဂြိုဟ်မှုများ ဘုရားသခင်၏မြို့တော် | အချိန်ဇယား
ဗဟိုအာဖရိကရှိချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ၏ဘ ၀ | DW မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
လျှို့ဝှက်အသိုင်းအဝိုင်း - စင်ပြိုင်ကမ္ဘာ၏ဒဏ္Myာရီများနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်များ | မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အပြည့်အစုံ
ကွမ်တန်ဇီဝဗေဒ - သဘာဝဝှက်ထားသောသဘာဝတရား